Umkhuleko wokuthi konke kuhambe kahle. ? Emsebenzini necala.
Umkhuleko ukuze konke kuhambe kahle emsebenzini noma ovivinyweni kuyisenzo sokholo sangempela.
Izikhathi eziningi kukholelwa ukuthi kuyisenzo sokufisa noma ukuthi kukhombisa ubuthakathaka noma ukungakwazi ukwenza izinto ngokwethu, kepha lokhu akulona iqiniso nakancane.
Isidingo sokuxhaswa nguNkulunkulu sikhombisa ukuthi singabantu bokomoya futhi sifuna wonke umuntu abe sendabeni ethinta thina noma ngoba sizoqala ibhizinisi elisha.
Into eluleka kakhulu ukuthi wenze lo mthandazo cishe kathathu ngosuku, ungawelula izinsuku ozifunayo.
Kunganele ngezinsuku ezintathu noma isicelo onaso singadinga ezinye izinsuku ezimbalwa.
Iqiniso ukuthi okuwukuphela kwesidingo sokuba umthandazo uphumelele ukholo oluyenziwa ngalo.
1 Umkhuleko wokuthi konke kuhambe kahle - Injongo
1.1 Umkhuleko ukuze konke kuhambe kahle emsebenzini
1.2 Umkhuleko ukuze konke kuhambe kahle ecaleni
1.3 Umkhuleko ukuze konke kuhambe ngendlela
2 Kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenzela?
Umkhuleko wokuthi konke kuhambe kahle - Injongo
Inhloso yalesi sigwebo icacile futhi ingasetshenziswa kuzo zonke izimo ezingenzeka.
Izikhathi eziningi siqala iphrojekthi entsha lapho singenalo iphesenti eliyikhulu kodwa sisafuna ukuzama, ngoba kulezo zimo lokhu umkhuleko Kubalulekile.
Ukucela isiqondiso sikaNkulunkulu ezintweni esizenzayo noma kuye ukuze asisize senze izinto ngokulungile kubalulekile.
Ukuvela okusha kungabuye kube emkhakheni wezifundo, lapho ukuvunyelwa nguNkulunkulu kuhlale kunenzuzo khona.
Noma singacela ukuthi ophakemeyo asisize siqhubeke ebudlelwaneni obuvele buthathe ama-nuances angafuneki.
Eqinisweni, lowo mkhuleko ukuze konke kuhambe kahle kungasebenza ezikhathini eziningi.
Kungenziwa nomndeni wonke futhi ngale ndlela, ekubeni sonke sihlangene sicela inhloso efanayo, umthandazo uba namandla ngokwengeziwe.
Khumbula ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi uma amabili noma amathathu evuma futhi ebuza uNkulunkulu uzonikeza izicelo ezenziwe.
Umkhuleko ukuze konke kuhambe kahle emsebenzini
“Nkulunkulu wami, ngicela ukuthi uma ungena emsebenzini wami umnyombo wakho ukhona, ngincenga ubukhona bakho ukuthi ngikubonge ngalolu suku omusha onginika lona. Ngiyacela ukuthi kube wusuku lokuthula futhi ugcwale umusa wakho, isihe sakho, uthando lwakho futhi konke kwenzeka ngokwecebo lakho elihle.
Namuhla, ngicela ukuthi wonke amaphrojekthi ami afezekiswe, imibono yami iyenziwa futhi nokufinyelelwa okuncane empilweni yami nomsebenzi wami kuyingxenye yobufakazi bakho obukhazimulayo.
Nkosi Jesu, busisa umsebenzi wami, abaphathi bami, amaklayenti ami, engisebenza nabo nabo bonke abantu abenze le nkampani ichume.
Baba osezulwini, vuselela intando yami namandla ami ukwenza umsebenzi wami ngendlela engcono kakhulu.
Namuhla, ngifisa inhliziyo enomusa wokuhlala ngikhonza abathengi bami kanye nozakwabo ngomusa. Nkosi, nginike umlomo omomothekayo, ingqondo nethemba elinengqondo elibonisa konke akubona abakuzungezile.
Susa amagama ahlabayo kimi ungenze umuntu omuhle.
Nginike izandla ezimbili ukuze ngisebenze ngihlonipha umndeni wami njalo, nginike umdlandla wokuvuka usuku nosuku ngimamatheke.
Nkosi ngiqondise emzuzwini wonke lapho ngizwa sengathi ngilahlekelwa inyakatho, yiba namandla ami nesibindi sami, nginike inhliziyo enesibindi njengakho.
Baba osezulwini uNkulunkulu, yenza lolu suku kanye nalo lonke usuku lomsebenzi kube okuhle kunakho konke, ngithathe esandleni sakho.
Kunezimo zomsebenzi noma izinselelo zomsebenzi omusha ezingangabazeki ezidinga usizo olwengeziwe emthandazweni.
Cela konke kuhamba kahle emsebenzini Kungumkhuleko wokuthi kungenziwa zonke izinsuku, ngaphambi kokuphuma endlini.
Isiko elihle esingalisebenzisa ekhaya ukuthandaza umthandazo owodwa ngosuku ngaphambi kokushiya wonke umuntu ekhaya ekuseni.
Ngale ndlela sisiza abancane noma labo ababuthakathaka ethembeni ukuba bathembele kakhulu emthandazweni.
Umkhuleko ukuze konke kuhambe kahle ecaleni
“IJaji elibusisiwe, ndodana kaMariya, kwangathi umzimba wami ungashiswa noma igazi lami lichithe. Nomaphi lapho ngiya khona, izandla zakho zingibamba.
Abafuna ukungibona kabi banamehlo futhi abangangiboni, uma banezikhali abangilimazi, futhi ngokungabi nabulungiswa bangangiholeli.
Ngengubo ebiyimbozwe uJesu manje sengisongekile, ukuze ngingahlukunyezwa noma ukubulawa, futhi ukunqotshwa kwejele angizukuhambisa. Ngokuhlangana kukaYise, iNdodana noMoya oNgcwele.
Ukubhekana necala elingokomthetho isikhathi sokunakwa kakhulu nokukhathalela lapho ukuthandazela konke kuhamba kahle kungasiza kakhulu.
Ukwazi ukuhambisa amandla amabi futhi sikwazi ukuqondisa lawo mahle endaweni lapho konke okushiwoyo nokwenziwayo kubhekwa khona ngamazinga amakhulu kakhulu kungaba wukusindiswa kwethu kuphela.
Ungathandaza ngaphambi naphakathi nesikhathi isahluleloKuyisenzo esizosisiza sigcine ukuthula futhi senze izinqumo ezinhle.
Umkhuleko ukuze konke kuhambe ngendlela
O Jesu, Wena uyiZwi leqiniso, UngukuPhila, ukuKhanya, Uyindlela yethu, Jesu, Nkosi yami ethandekayo, owathi: «Cela uzokunikwa, funa uzokuthola, ungqongqoze uzovulelwa wena, »ngokuncenga kukaMariya Umama Wakho Obusisiwe, ngiyabiza, ngiyakufuna, ngicela kuwe ngethemba lonke lokuthi uzonginika lokho engikudinga ngokushesha: (Yisho lokho ofuna ukukufeza). Thandaza obaba bethu abathathu, Thokozani ama-Marys amathathu no-Glories amathathu.
O Jesu, uyiNdodana kaNkulunkulu ophilayo, ungufakazi kaNkulunkulu othembekile el mundoUnguNkulunkulu unathi, uJesu Nkosi Yamakhosi, owathi "Noma yini oyicelayo kuBaba eGameni Lami uzokunika yona" ngokuncenga uMariya, Umama Wakho Obusisiwe, ngicela ngokuzithoba nangayo yonke inhliziyo yami ukukholwa okukhulu Baba eGameni Lakho ukuthi ungiphe lo musa engikuthola kunzima ukuwuthola ngezindlela zami ezibuthakathaka: (Phinda ngethemba elikhulu lokho ofuna ukukuthola). Thandaza obaba bethu abathathu, Thokozani ama-Marys amathathu no-Glories amathathu.
O Jesu, uyiNdodana kaMariya, Ungumnqobi wobubi futhi ukufaUyisiqalo nesiphetho, uJesu, iNkosi yamaKhosi, owathi: «Izulu noMhlaba kuyodlula, kepha izwi lami ngeke lidlule» ngokuncenga kukaMariya, Umama Wakho Obusisiwe, ngizizwa ngithemba ngokuphelele ukuthi isicelo sizonikezwa: (Yisho isicelo futhi ngokuzinikela okukhulu).
Ngaphambi kokungena egumbini lokusebenzela kuhlale kunovalo olukhona lokungazi ukuthi kungenzeka yini, yingakho ukwenza umthandazo ukuze kusebenze futhi inqubo yonke ilungile.
Okunconyelwe kakhulu ukuthi yenza lo mkhuleko nesiguli ngaphambi kokungena egumbini lokuhlinzwa, kufanele ubuze ngokuqondile futhi uqonde lokho esifuna ukukubona.
Ekugcineni, kuhle ukubonga, ngale ndlela amandla amakhulu adluliswa abalulekile kuzo zonke izinqubo zezempilo.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenzela?
Imikhuleko ayinazo izikhathi eziqondile.
Imvamisa, ngokuya ngesimo, kungathatha imizuzu embalwa noma amahora ambalwa ekusebenzeni.
Okusemqoka ukuthi uqinisekile ukuthi uzogijima kahle.
Ngale ndlela, umkhuleko ukuze konke kuhambe kahle emsebenzini, ukwahlulela nokusebenza kuzosebenza ngokushesha futhi iyasebenza.